I-Sunny COTTAGE-iKhaya leHolide
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguMassimiliano
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uMassimiliano iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
I-bungalow enomtsalane ebekwe kwiinduli zeChieti. Ixhotyiswe ngabo bonke ubutofo-tofo obubandakanya umabonwakude egumbini, umoya, indawo yokupaka yabucala, ibarbeque kunye nefanitshala yangaphandle ukonwabela ukuphumla ngokupheleleyo uhlaza olujikelezileyo ukuze lusetyenziswe kuphela! Kummandla okufutshane kukho ivenkile enkulu, ikhemesti, isikhululo sepetroli, iindawo zokutyela nokunye okuninzi. Ifakwe kwimizuzu embalwa ukusuka kumbindi weChieti, ukusuka esibhedlele nakwiyunivesithi, kwikhaya labalupheleyo laseVilla Pini, ulwandle kunye neentaba imizuzu eyi-15 ngemoto!
Uya kuba ne-bungalow yonke ebekwe kuluhlaza wenduli apho uya konwabela iimbono ezikhethekileyo, ubumfihlo kunye nokuzola.
4.75 · Izimvo eziyi-48
Ukuhamba ngemizuzu eyi-15 ukuya uya kuzifumana useFrancavilla al Mare apho unokonwabela zonke iindawo zokuchithela iiholide zolwandle lwaseAbruzzo (ezifana nePescara, Ripari di Giobbe eOrtona, Punta Aderci, costa dei trabocchi eVasto, njl. ) kolwalathiso Maiella ntaba! Ifakwe imizuzu emi-5 ngemoto ukusuka kwisibhedlele saseChieti, kwikhampasi yaseyunivesithi kunye nekliniki yonyango yabucala eVilla Pini d'Abruzzo.
Sithetha isiNgesi, isiFrentshi
Iindwendwe zaseAnglais, eFrancais
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- De Rosa